Sika iinwele zakho ephupheni: iintlobo zokutolika. Kuthetha ukuthini ukusika iinwele ephupheni wena okanye umntu?
Sika iinwele zakho: lithetha ukuthini leli phupha?
Yintoni ephupha inwele?
Izinwele - enye yezinto eziyimfihlelo kunye nemilingo "yeempawu" zomzimba womntu. Kwixesha la mandulo, iinwele ezinde zazibhekwa njengengcaciso yokufumana umgca kwisithuba. Ngenxa yoko, ukusoka kweenwele bekusoloko kubonwa njengokonakaliswa kwamandla obalulekileyo ngumnini wabo. Iinkolelo ezinjalo ziye zashiya impembelelo nakwiiphupha-iphupha apho umntu anqumla khona iinwele zakhe, ngokuqhelekileyo kubangele ukuvakalelwa kunye nokulahleka. Ngoko, kuthetha ukuthini ukusika iinwele ephupheni? Namhlanje, siza kujonga ukutolika okuchaziweyo ngokubanzi.
I-Dream Interpreter - I-Haircut kwi-hairdresser Yinquma iinwele kwiphupha kumntu Yoke iinwele zakho: ukuchazwa kobushushu Kuthetha ukuthini ukusika iinwele kwiphupha kumntu?
Sika iinwele zakho: ukuchazwa kokulala
Ngamanye amaxesha umntu ulala kwaye ubone indlela acula ngayo iinwele zakhe - umfanekiso omtsha awamthandayo kunye neengxaki ezintle. Lindela iindaba ezilungileyo okanye owaziwayo! Yaye ukuba i-styles ihlulekile kwaye ibangela ukunganeliseki? Enyanisweni, ukuxabana nezihlobo kunye nezinye iingxaki zinokwenzeka. Nangona abaninzi abaguquli beliphupha baphatha iinqwelo zesikhumba ngaphakathi kwiphupha njengokulahlekelwa ngokwenene kwikhokelo lobomi kwaye, ngokubanzi, intsingiselo yobomi.
Ngokutsho kwencwadi yephupha kaVanga, umphuphi oyeke uboya bakhe ebuthongweni bakhe, wakhubeka ebomini bakhe "kwindlela yokwenyaniso". Ngoko, umntu kufuneka aguquke aze athwale isijeziso esithile.
Sika iinwele zakho ephupheni
Iinguqulelo zephupha likaFreud uphatha iphupha elinjengophumelelo lwenyaniso kwi shishini okanye ishishini. Ngamanye amaxesha umntu uzibona ephupheni enezikrele-mhlawumbi uya kufumana indlela yokufaka iingcamango zakho okanye iiminqweno.
Ukuzibamba ngeenwele ngomatshini kuthetha iindleko eziphezulu ezingalindelekanga okanye ukuqala kwexesha elide lokuntuleka kwemali. Enye iphupha elithakazelisayo elinxulumene nokusika izinwele: indoda iyanqumla iinwele zakhe kungekudala ngenxa yeengxube ezibonakalayo. Oku, ngokuchaseneyo, "ukulala esandleni" - ubomi bubangalisa ngethuba lenzuzo okanye ukuthengiswa ngempumelelo.
Kuthetha ukuthini ukusika iinwele kwiphupha kumntu?
Ininzi iincwadi zephupha zithi: ukusika iinwele komnye umntu uphakamisa inzuzo yezemali okanye amava aphila ubomi obuncedo. Enye inketho kukuba ufumana umvuzo wemali-mbulela kumhlobo okanye umlingane wokuncedisa ingxaki.
Ukuze intombazana encinci ikhwebe inwele yakhe ephupheni kumfana oselula-ebubini obunzulu. Indoda eboya iinwele zentombazana yimiqondiso yokuba ngokukhawuleza ubudlelwane buya kuguquka.
Ukuba ibhinqa licula iinwele zomngane wakhe ephupheni, ngoko ingqondo ifuna utshintsho oluhle ebomini bakhe bomntu - umhlobo omtsha okanye umtshato onolonwabo. Nangona kunjalo, ngokutsho kwencwadi yephupha likaMiller, eli phupha lifaka ubungqina kwiingcamango "ezingenangqondo" zephupha kumfazi wakhe intombi.
Iphupha leNgxoxo - I-Haircut kwi-hairdresser
Ukuchazwa kweli phupha kuncike kakhulu kwiimvakalelo ezihambisane nomntu ngeli phupha. Ukuba ulophupha, uzive uvuyo lokulindela ukutyelela unwele wezinwele kunye nokuncuma kweenwele eziphumelelayo ezenziwe ngezandla zenkosi - lindela ukuvuswa kokuphila okutshintsha kakhulu. Ngaphezu koko, ukuba umphumo womsebenzi uyonwabile. Mhlawumbi umphuphi ulindele isipho esilinde ixesha elide okanye umvuzo wemali.
Yintoni esivame ukuyenza xa si tyelela umnwele? Ukuzonwabisa, umnqweno wokuhlaziywa - akusikho nto abayithethayo ukuba "ukuba umfazi uthatha isigqibo sokutshintsha ubomi bakhe, uqala ngekhanda." Njengomthetho, umbala ofanayo wombala ukhona kwiphupha, apho siza kunqumla iinwele kwi-hairdresser.
Sika iinwele zakho ephupheni kumntu
Ukuba inwele yeenwele zendoda iphupha, oko oku kunokufanekisela ixesha lokungabikho kwemisebenzi kunye nokubonakala kwamatyala. Sika iinwele zakho kwiindevu zakho ngokulindela ukuvuswa kwentsapho ye-scandals okanye umtshato.
Njengoko ubona, abaninzi baphupha ukutolika baphathe iphupha malunga neenwele zokusika njengengcamango yeengcinga zangempela nezenzo zomntu. Ngoko phila ngokuvisisana nawe kunye nehlabathi elijikelezile-kwaye uya kuphupha kuphela amaphupha amahle.
Indlela yokugcina nokuphucula umbono?
Ikhekhe kunye nama-oranges kunye ne-yogurt
Ngaba kunokwenzeka ukwandisa amabele ekhaya
Indlela yokufunda ukuba ungayesabi uthando
Inyama ngesiFrentshi kwi-multivariate
I-pie ye-lemon ne-meringue